WINE 6.20 Inosuma 398 Shanduko uye Paves Nzira yeRC | Linux Vakapindwa muropa
Pablinux | 23/10/2021 13:16 | Noticias
Uye kunyangwe yakawanda software ichiramba ichikweva vhezheni zvekare, senge Gitare Pro 7 iyo inoshandisa WINE 3.20 kana tikaiisa kuburikidza nePlayOnLinux, vhezheni itsva yakagadzika yesoftware iyi yatove pedyo kuti ishandise maWindows application pane mamwe masisitimu anoshanda. Nezuro manheru kuSpain yakakanda WAINI 6.20, inova imwe yekupedzisira (kana isiri yekupedzisira) shanduro dzekuvandudza isati yaburitsa Vanoburitswa Vanokwikwidza.
Muna 6.18 basa rakatanga kutsigira HID joystick, chimwe chinhu chakaenderera mberi 6.19, uye muWINE 6.20 ichave iyo chete yemufaro backend inotsigirwa neWINE muDirectInput kodhi nzira. Vhiki rino WineHQ yekuvandudza timu yakagadzirisa 20 bugs uye yakaunzwa shanduko makumi matatu nenomwe. Iwo ari akati wandei mashoma pane emavhiki maviri apfuura pavakasvika kana kudarika mazana mashanu, asi zvakati wandei kupfuura pane dzimwe nguva pavaipfuura zvakapetwa mazana maviri.
WINE 6.20 inosimbisa
MSXml, XAudio, DInput uye mamwe mamodule akashandurwa kuita PE.
Mamwe maraibhurari ehurongwa akaverengerwa nekodhi kodhi yekutsigira PE kuvaka.
Iyo HID joystick ikozvino ndiyo yega joystick backend inotsigirwa muDirectInput.
Tsigiro iri nani yeMSVCRT inovaka muWinelib.
WAINI 6.20 ikozvino inogona kutorwa kubva izvi madokero kumwe kubatana. WineHQ zvakare inopa ruzivo kurodha pasi izvi uye neramangwana zvigadziriso nekuwedzera iyo yepamutemo repository yeLinux pano, asi inogona zvakare kuiswa pane macOS uye Android. Kana dura rikawedzerwa, unogona kusarudza pakati peshanduro, Stage kana Dev shanduro.
Sekutaura kwataita, tatosvika padanho rekuti Vachaburitswa Vachabuda vachatanga kubuda munguva pfupi iri kutevera, saka svondo rinouya rinogona kunge riri svondo rekutanga kuburitswa kweRC. Kana izvi zvikaitika, izvo zvinoburitswa zvichave vhiki nevhiki, uye shanduko dzinotarisa pakuita kuti zvese zvishande pamwe nekugoneka kune yakagadzikana vhezheni. WINE 7.0 inoitika kutanga kwegore rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.20 inosvitsa 398 shanduko uye inovhura nzira yeVanoburitswa Vanokwikwidza.
Ubuntu 21.10 Impish Indri. Kukura kunofinha (Opinion)